ညီရဲသစ်: ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ချစ်စံအိမ် 26 February 2012 at 03:12
ဟုတ်တယ် ကိုရဲရေ ဘယ်လိုပြောရမလဲတောင်မသိတော့ဘူး
ဟူးးးးးတော်ပါပြီ အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မယ် :D
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် 26 February 2012 at 12:25
မှန်လိုက်တာဗျာ ....တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲဗျာ
ပျိုးယုဝသုန် 26 February 2012 at 12:57
မှန်တယ်ညီရဲရေ...တိုးတက်လာတာနဲ့ဆုတ်ယုတ်လာတာတွေကို ညီမျှခြင်းချကြည့်ရင်ကိုတော်တော်ကွာဟနေပြီ... ဆိုးပါ့
san htun 26 February 2012 at 13:31
အချိန်ပိုင်းလုပ်၊ ကျောင်းတက်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားက လူငယ်တွေ မြင်ရတိုင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ ဘောလုံးပွဲလောင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတာ မြင်ရတော့ ရင်လေးတယ်...
jasmine(တောင်ကြီး) 26 February 2012 at 21:16
Candy 26 February 2012 at 22:54
ရန်ကုန်အိမ်က မောင်ဝမ်းကွဲလေ.. ၉တန်း.. ဂိမ်းဆိုင်ပဲ ရောက်နေလို့တဲ့ အဒေါ်တွေ လိုက်လိုက်ခေါ်ရတယ်တဲ့ မလွယ်ဘူး >.<
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 27 February 2012 at 05:34
ဘောလုံးကန်ရာကနေ ဂိမ်းဆိုင်ထဲ အနေများမှုဟာ တကယ်ကို ရင်လေးစရာနော်.. လူငယ်တွေမှာလည်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အားနည်းလာရင် ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်မှုတွေပါ အားနည်းလာတော့မှာ အသေအချာ။
ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်ထက် ဘီယာကို ပိုပြီးစွဲမက်လာကြတာလည်း စိတ်မကောင်းစရာ.
ကိုဇော် 27 February 2012 at 05:58
အမှန်ပဲ။ စနစ်မကောင်းတာကို ထွက်ပေါက် ယူကြရင်းနဲ့ တိုးတက်မှုတွေက တခြားတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာ။ နောက်မျိုးဆက် အတွက် တကယ်ကို ရင်လေးပါတယ်။
ပန်းချီ 27 February 2012 at 08:25
ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရအောင် ရေးထားတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ ရဲရဲရေ။ တကယ်မလွယ်ဘူးပဲ။
သတိထားမိတာက ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကြောင်းကို မြင်အောင် ပုံဖော်ရေးလေ့ရှိတား)
နေ၀သန် 27 February 2012 at 10:48
ခေတ်.. ခေတ်... ခေတ် လို့ပဲဆိုရမလား... ကိုညီရဲရေ.... ကလေးတွေ လမ်းပေါ်မရှိတော့တာက... ကျူရှင်ကျောင်းတွေများတာကလည်း.. ခေတ်လို့ပဲဆိုမလား.. ခေတ်ကိုက အပြိုင်အဆိုင်ခေတ်ကိုး... ဒီလိုမှ မလုပ်ရင်လည်း နောက်ကောက်ကျကျန်ခဲ့မှာကိုလည်း မိဘတွေက စိုးရိမ်နေတာကိုးဗျ.... ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကတော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော့.... မြေလှန်ပစ်ရမယ်...း))
မြသွေးနီ 27 February 2012 at 14:26
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ကလေးတွေအပေါ်မှာရော၊ ကလေးမိဘတွေအပေါ်မှာပါ ဖိအားပေးတာ ခံနေကြရတယ်။ လူငယ်ပီပီ ချရေးပြရဲတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို နှစ်သက်မိပါတယ်။
ညိမ်းနိုင် 28 February 2012 at 20:45
ခေတ်၊စနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေကြသူတွေရဲ့ ကောင်းမှုတွေပါပဲညီရာ...၊
ဂိမ်းတွေ၊ဘောလုံးပွဲနဲ့ ကာစီနို၊ထီ လောင်းကစားတွေဆိုတာ အနောက်နိုင်ငံတွေ
ကစခဲ့တာတွေပါပဲ...၊နိုင်ငံတကာမှာလည်း ရှိနေတာပဲ...၊ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က
လူငယ်လေးတွေမှာမှ ဘာကြောင့်အဲဒီအရာတွေက ပျက်ဆီးခြင်းလမ်းစကိုနင်း
မိသလိုဖြစ်ရတာလဲ....၊ကျောင်းသားတွေပေမယ့် အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်ကြရ
တဲ့၊လုပ်နိုင်ကြတဲ့၊လုပ်လည်းလုပ်ချင်ကြတဲ့ တိုင်းတစ်ပါးလူငယ်တွေနဲ့ အလုပ်
အခွင့်အလမ်းတွေရှားပါးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်
ရင် ဒါတွေဟာ လူငယ်တွေရဲ့အပြစ်ထက် လူကြီးတွေရဲ့အပြစ်ပါပဲလေ...၊
ချစ်သူရင်ခွင် 29 February 2012 at 10:42
မဒမ်ကိုး 29 February 2012 at 15:21
မှန်လိုက်တာညီရဲရေ လူငယ်တွေကိုစာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာတွေသေချာလေ့ကျင့်ပေးနိုင်မှတန်ခါကျတော့မယ် ထင်တယ် ခုခေတ်ကြီးကပိုရင်မောစရာကောင်းနေတယ်း((
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) 1 March 2012 at 11:00
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 1 March 2012 at 23:18
အင်ကြင်းသန့်6March 2012 at 15:02
အင်း....လူငယ်တွေအတွက် ရင်လေးစရာကောင်းတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရင်လေးနေရုံနဲ့မပြီးဘဲ သူတို့ဘ၀အတွက် ကောင်းမွန်တိုးတက်ဖို့ ကြိုးစားချင်လာအောင် လူကြီးတွေက နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းကျာင်း လမ်းပြပေးဖို့လည်း လိုတာ အမှန်ပဲ ကိုကြီးရဲရဲရေ....